HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Abkazianina Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Alemà Altaï Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Ateso Attié Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boulou Bété Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Dayak Ngaju Douala Drehu Dusun Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fon Frantsay Futuna (Atsinanana) Ga Galoà Gitonga Gokana Goun Grika Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guéré Haoussa Herero Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisii Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kpelle Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guyane Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kreôla any Seychelles Krio Kurde Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Lambya Lari Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathe Mazahua Mbunda Mende Meru Mizo Mongol Mooré Myama Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nsenga (Zambia) Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Odia Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Pendjabi (Shahmukhi) Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Serbia) Rômania (Slovakia Atsinanana) Samoanina Sangir Sango Sena Sepedi Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tankarana Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Myama Tenin’ny Tanana Népali Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Umbundu Urhobo Uruund Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wichi Wolaita Yacouba Zandé Zoloa Éwé
1, 2. Inona no eritreretin’ny olona maro?
RAVA ny tanàna iray fa nandalovan’ny tsunami. Nanao tifitra variraraka tao am-piangonana ny rangahy iray, ka be dia be no naratra sy maty. Matin’ny kansera ny vehivavy iray, ka lasa kamboty ny zanany dimy.
2 Rehefa mitranga ny loza hoatr’ireny, dia betsaka no mieritreritra hoe: ‘Fa maninona no be dia be no mijaly, sady ratsy toetra be ny olona?’ Efa nieritreritra hoatr’izany koa ve ianao?
3, 4. a) Inona no nanontanian’i Habakoka an’i Jehovah? b) Inona no navalin’i Jehovah azy?
3 Resahin’ny Baiboly fa efa nieritreritra an’izany koa ny olona sasany tena nino an’Andriamanitra. Hoy, ohatra, i Habakoka mpaminany tamin’i Jehovah: “Nahoana no ataonao mahita zava-dratsy aho, ary jerenao fotsiny ny faharatsiana? Nahoana no misy fandrobana sy herisetra eo anoloako, ary nahoana no misy fifamaliana sy fifandirana?”—Habakoka 1:3.
4 Namaly an’i Habakoka i Jehovah ao amin’ny Habakoka 2:2, 3, ka nampanantena fa hanao zavatra. Tena tia antsika i Jehovah, satria milaza ny 1 Petera 5:7 fa “miahy” antsika izy. Raha tsy tia mahita olona mijaly isika, dia izy mbola tsy tia an’izany mihoatra noho isika. (Isaia 55:8, 9) Nahoana anefa no be dia be no mijaly? Andeha hojerentsika izany.
NAHOANA NO BE DIA BE NO MIJALY?
5. Inona no lazain’ny mpitondra fivavahana rehefa misy olona mijaly? Inona anefa no lazain’ny Baiboly?
5 Rehefa misy olona mijaly, dia matetika ny mpitory teny sy mompera ary pasitera no miteny hoe izany no sitrapon’Andriamanitra. Misy indray milaza fa tsy ho azontsika mihitsy hoe nahoana no mitranga ny zavatra sasany. Efa lahatra avy amin’Andriamanitra daholo, hono, ireny na dia ny zavatra ratsy aza. Ny hafa mampianatra fa alain’Andriamanitra any aminy ny olona matoa maty, na dia ny zazakely aza. Tsy marina anefa izany. Tsy manao ratsy mihitsy i Jehovah. Hoy ny Baiboly: “Sanatria an’ilay tena Andriamanitra ny hanao ratsy, ary sanatria an’ilay Mahery Indrindra ny hanao ny tsy rariny!”—Joba 34:10.
6. Nahoana ny olona maro no manome tsiny an’Andriamanitra isaky ny misy zavatra ratsy mitranga?
6 Be dia be no manome tsiny an’Andriamanitra isaky ny misy zavatra ratsy mitranga, satria heverin’izy ireo fa izy no mpitondra an’izao tontolo izao. Efa hitantsika tao amin’ny Toko faha-3 anefa fa i Satana Devoly no mpitondra an’izao tontolo izao.
7, 8. Nahoana no be dia be ny olona mijaly?
7 Milaza ny Baiboly fa “izao tontolo izao manontolo”, dia “eo ambany fahefan’ilay ratsy.” (1 Jaona 5:19) Ratsy toetra sady tsy miantra mihitsy i Satana, ilay mpitondra an’izao tontolo izao. “Mamitaka ny tany rehetra misy mponina” izy. (Apokalypsy 12:9) Be dia be ny olona manahaka azy ka mandainga sy ratsy toetra ary tsy miantra. Anisan’ny mahatonga ny olona hijaly izany.
8 Misy antony hafa koa. Rehefa nanota i Adama sy Eva, dia lasa mpanota daholo ny taranany. Mpanota izy ireo ary te ho ambony noho ny namany. Matetika ny olona sy ny firenena no miady, ary betsaka no mampijaly kely, ka izany no mahatonga ny fijaliana. (Mpitoriteny 4:1; 8:9) Mety ho “azon-tsampona” koa ny olona “amin’ny fotoana tsy ampoizina”, ka lasa mijaly. (Mpitoriteny 9:11) Mety ho tratran’ny loza tampoka ny olona iray, raha sendra eny amin’ny toerana itrangan’ilay loza.
9. Mino ve ianao fa misy antony matoa mbola avelan’i Jehovah hijaly ny olona? Nahoana?
9 Tsy i Jehovah mihitsy no mahatonga ny olona hijaly. Tsy izy no tokony homena tsiny rehefa misy ady, na zava-dratsy, na mpampijaly kely. Tsy izy no mampisy ny horohoron-tany, rivo-doza, tondra-drano, na loza hafa. Mety hieritreritra anefa ianao hoe: ‘Raha i Jehovah tokoa no mahery indrindra, maninona raha sakanany tsy hitranga ireny loza ireny?’ Fantatsika fa tena tia antsika Andriamanitra. (1 Jaona 4:8) Tsy maintsy misy antony àry matoa mbola avelany hijaly ny olona.
NAHOANA NO AVELAN’I JEHOVAH HIJALY ISIKA?
10. Inona no nolazain’i Satana momba an’i Jehovah?
10 Nofitahin’i Satana Devoly i Adama sy Eva tao amin’ny zaridainan’i Edena. Nolazainy fa tsy mahay mitondra Andriamanitra. Misy zavatra tsara tsy omeny an’i Adama sy Eva, hono. Izy, hono, no mahay mitondra kokoa noho i Jehovah, ary tsy mila an’Andriamanitra, hono, ny olona.—Genesisy 3:2-5; jereo ny Fanamarihana 27.
11. Inona ny fanontaniana mila valiana?
11 Tsy nankatò an’i Jehovah i Adama sy Eva ary nivadika taminy. Nieritreritra izy ireo fa afaka manao izay tiany. Inona no nataon’i Jehovah mba hanaporofoana hoe diso izy ireo, fa izy ihany no tena mahalala an’izay mahasoa azy ireo?
12, 13. a) Nahoana no tsy tonga dia naringan’i Jehovah i Adama sy Eva? b) Nahoana i Jehovah no namela an’i Satana hitondra an’izao tontolo izao sady namela ny olona hanangana fanjakana?
12 Tsy tonga dia naringan’i Jehovah i Adama sy Eva fa navelany hiteraka. Navelany hifidy avy eo ny taranak’i Adama sy Eva hoe iza no tian’izy ireo ho mpitondra. Tian’i Jehovah ho feno olona lavorary eto an-tany, ary tsy maintsy ho tanteraka izany na inona na inona ataon’ny Devoly.—Genesisy 1:28; Isaia 55:10, 11.
13 Anjely an-tapitrisany koa no nahita an’i Satana nanendrikendrika an’i Jehovah. (Joba 38:7; Daniela 7:10) Navelan’i Jehovah handeha àry ny fotoana mba hahitan’ny rehetra hoe marina ny tenin’i Satana sa tsia. Navelany hanangana fanjakana koa ny olona ka i Satana no lehiben’izy ireo. Ho hita eo raha mety ihany ny fiainan’izy ireo rehefa tsy ampian’Andriamanitra.
14. Inona no voaporofo rehefa nandeha ny fotoana?
14 Nitondra ny fiainany tokoa ny olona nandritra ny an’arivony taona, nefa nisy foana ny olana. Hita mihitsy hoe mpandainga i Satana. Tena mila an’Andriamanitra ny olona. Marina ilay tenin’i Jeremia mpaminany hoe: “Jehovah ô, fantatro tsara fa tsy an’ny olombelona ny lalan-kalehany. Tsy natao hitondra samirery ny fiainany koa ny olona.”—Jeremia 10:23.
NAHOANA I JEHOVAH NO MIANDRY ELA BE?
15, 16. a) Nahoana i Jehovah no miandry ela be? b) Nahoana i Jehovah no tsy mandamina ny zava-dratsy nataon’i Satana?
15 Nahoana no miandry ela be hoatr’izao i Jehovah? Nahoana no avelany hitranga ny zavatra ratsy fa tsy sakanany? Elaela vao voaporofo hoe tsy mahay mitondra i Satana. Efa nanandrana fitondrana maro be ny olona fa tsy nisy nety. Nahavita nampandroso ny teknolojia ihany izy ireo, nefa vao mainka be dia be ny mahantra, olon-dratsy, miady, ary iharan’ny tsy rariny. Tsy ho sambatra mihitsy isika raha tsy Andriamanitra no mitondra antsika.
16 Tsy mandamina ny zava-dratsy vokatry ny ataon’i Satana anefa i Jehovah. Raha manao an’izany izy dia hoatran’ny hoe manohana an’i Satana, nefa tsy hanao an’izany mihitsy izy. Raha sakanany daholo koa ny zava-dratsy tokony hitranga, dia hieritreritra ny olona hoe mahavita mitondra irery ny fiainany tokoa izy ireo. Lainga anefa izany ary tsy hiray tsikombakomba amin’izany mihitsy i Jehovah.—Hebreo 6:18.
17, 18. Inona avy no hataon’i Jehovah, amin’ny hoavy, mba handaminana ny zavatra ratsy nataon’i Satana?
17 Vitan’i Jehovah ny manarina ny tsy mety rehetra nataon’i Satana sy ireo olona tsy nankatò azy. Tsy misy zavatra tsy vitany mantsy. Izy no mahalala hoe rahoviana no ho voaporofo tsara fa mpandainga i Satana. Hataony paradisa indray ny tany avy eo. Hatsangany koa izay rehetra “any am-pasana.” (Jaona 5:28, 29) Tsy harary na ho faty intsony ny olona. Hesorin’i Jesosy ny zavatra ratsy rehetra nataon’i Satana. Hasain’i Jehovah “handrava ny asan’ny Devoly” koa i Jesosy. (1 Jaona 3:8) Soa ihany fa niandry i Jehovah. Raha tsy izany mantsy isika tsy nahalala azy, sady tsy afaka nifidy azy ho mpitondra antsika. (Vakio ny 2 Petera 3:9, 10.) Mbola mijaly isika izao nefa manampy antsika hiaritra izy.—Jaona 4:23; vakio ny 1 Korintianina 10:13.
18 Tsy manery antsika hanompo azy i Jehovah. Nataony afaka mifidy izay tiantsika hatao isika. Handeha hojerentsika ny momba an’izany.
INONA NO HOFIDINAO?
19. Inona no mampiavaka antsika olombelona? Faly ve ianao fa afaka manao safidy, ary nahoana?
19 Tsy nataon’i Jehovah toy ny biby isika fa afaka mifidy izay tiantsika hatao. Ny biby mantsy izay voajanahary aminy ihany no ataony. (Ohabolana 30:24-28) Isika kosa afaka mifidy izay tiantsika hatao eo amin’ny fiainana, ka afaka mifidy ny hampifaly an’i Jehovah na tsia. Tsy hoatran’ny fitaovana koa isika ka hoe izay ampanaovina azy ihany no ataony. Tian’i Jehovah hankafy fiainana kosa isika ka avelany hifidy ny toetra tiantsika hananana, ny olona tiantsika ho namana, ary ny zavatra tiantsika hatao.
20, 21. Inona ny safidy tsara tokony hataonao?
20 Tian’i Jehovah ho tia azy isika. (Matio 22:37, 38) Raintsika mantsy izy. Faly ny raim-pianakaviana rehefa miteny aminy ny zanany hoe tia azy, indrindra raha vokatry ny fony izany fa tsy noterena. Avelan’i Jehovah hifidy koa isika na hanompo azy na tsia. Nifidy ny tsy hankatò azy i Adama sy Eva ary Satana. Ary ianao? Inona no hofidinao?
21 Manompoa an’i Jehovah. Olona an-tapitrisany no mifidy ny hampifaly an’Andriamanitra ka manohitra an’i Satana. (Ohabolana 27:11) Inona no azonao atao dieny izao, raha te ho ao amin’ny tontolo vaovao ianao ka tsy hijaly intsony? Hovaliana ao amin’ny toko manaraka izany.
HEVITRA 1: TSY MAMPIJALY OLONA MIHITSY I JEHOVAH
“Sanatria an’ilay tena Andriamanitra ny hanao ratsy, ary sanatria an’ilay Mahery Indrindra ny hanao ny tsy rariny!”—Joba 34:10
I Satana Devoly no mitondra an’izao tontolo izao.
Ny olona ihany no mampijaly ny olon-kafa.
Sendra eo amin’ny toerana itrangan’ny loza ny olona sasany.
Tia antsika i Jehovah ka malahelo izy mahita antsika mijaly.
HEVITRA 2: NILAZA I SATANA FA TSY MANANA ZO HITONDRA I JEHOVAH
“Fantatr’Andriamanitra fa ... hahiratra ny masonareo, ary ho tahaka an’Andriamanitra ianareo, hahalala ny tsara sy ny ratsy.”—Genesisy 3:5
Nahoana i Jehovah no nila nanaporofo hoe diso i Satana?
Nilaza i Satana fa tsy mahay mitondra i Jehovah. Afaka manao izay tiany, hono, ny olona, fa tsy mila an’i Jehovah hiteny hoe izao no tsara na izao no ratsy.
Anjely an-tapitrisany no nahita an’i Satana nanendrikendrika an’i Jehovah.
HEVITRA 3: TRATRA NY LAINGAN’I SATANA
‘Tsy natao hitondra samirery ny fiainany ny olona.’ —Jeremia 10:23
Nahoana ny olona no mbola mijaly foana?
Efa nanandrana fitondrana maro be ny olona. Tsy sambatra mihitsy anefa izy ireo raha tsy Andriamanitra no mitondra.
Manam-paharetana i Jehovah ka navelany hahalala azy sy hifidy azy ho Mpitondra isika.
Hasain’i Jehovah hesorin’i Jesosy ny zavatra ratsy rehetra nataon’i Satana.
HEVITRA 4: MANOMPOA AN’I JEHOVAH
“Hendre, anaka, ... mba hamaliako an’ilay manaratsy ahy.”—Ohabolana 27:11
Nahoana isika no tsy teren’i Jehovah hanompo azy?
Izay voajanahary aminy ihany no ataon’ny biby. Isika kosa nataon’i Jehovah afaka mifidy ny hampifaly azy na tsia.
Tian’i Jehovah raha fitiavana no antony hanompoantsika azy.
Nahoana Isika no Avelan’Andriamanitra Hijaly? (Fizarana 1)
Nahoana Isika no Avelan’Andriamanitra Hijaly? (Fizarana 2)